ဟဒီးဆ်: ကျွန်တော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အား မည်သည့်အပြစ်အကုသိုလ်သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သင့်အားဖန်ဆင်းတော်မူသည့် အရှင်ဖြစ်ပါလျက် သင်သည် အခြားအရာများကို အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ကျွန်တော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အား မည်သည့်အပြစ်အကုသိုလ်သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သင့်အားဖန်ဆင်းတော်မူသည့် အရှင်ဖြစ်ပါလျက် သင်သည် အခြားအရာများကို အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
အမျိုးအစား: အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ရဗ်ဖြစ်ခြင်း၌ တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူခြင်း။ .
အဗ်ဒုလ္လာဟ်ဗင်န်မတ်စ်အူးဒ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အား မည်သည့်အပြစ်အကုသိုလ်သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါသနည်းဟုမေးလျှောက်ခဲ့ရာ ကိုယ်တော်က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သင့်အားဖန်ဆင်းတော်မူသည့် အရှင်ဖြစ်ပါလျက် သင်သည် အခြားအရာများကို အရှင်မြတ်နှင့် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်က ထို့နောက် မည်သည့်အပြစ်အကုသိုလ်သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါနည်းဟု မေးလျှောက်ခဲ့ရာ ကိုယ်တော်က ၎င်းနောက် သင့်သားသမီးက သင်နှင့်အတူခွဲဝေ စားသောက်ကြမည်ကို စိုးရိမ်၍ ၎င်းကို သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်က ထို့နောက် မည်သည့်အပြစ်အကုသိုလ်သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပါနည်းဟု မေးလျှောက်ခဲ့ရာ ကိုယ်တော်က ၎င်းနောက် သင့်အိမ်နီးချင်း၏ ဇနီးအား (ဇိနာ) တရားမဝင်ကာမမှု ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဆွဟာဗဟ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟွမ်)များက အကြီးဆုံး အပြစ်အကုသိုလ်များနှင့်ပတ်သက်၍ မေးလျှောက်ကြသဖြင့် ကိုယ်တော်က ၎င်းတို့အား အကြီးဆုံး အပြစ်အကုသိုလ်များအကြောင်း ဖြေကြားတော်မူခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ (ရှိရ်က် အက္ကဗရ်) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး သောဝ်င်ဗဟ် အမှားဝန်ခံမှုမပြုဘဲ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုပြစ်မှုအား လုံးဝခွင့်လွှတ်တော်မူမည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ ထိုအပြစ်အားကျူးလွန်သူသည် သေဆုံးသွားလျှင် ငရဲမီး၌ ထာဝရနေရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဒုတိယ အကြီးဆုံးပြစ်မှုမှာ လူတစ်ဦးက မိမိ၏သားသမီးအား မိမိနှင့်အတူ ဝေမျှစားသောက်ကြမည်ကို စိုးရိမ်၍ သတ်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ဟရာမ် တားမြစ်ထားသော အသက်တစ်ချောင်းကို သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ဒုတိယအကြီးဆုံး အပြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်သည်။ အသတ်ခံရသူသည် သတ်လိုက်သူ၏ သားချင်းအရင်းအချာဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်ပိုကြီးပြီး ပြစ်ဒဏ်သည်လည်း နှစ်ဆတိုးသွားလေသည်။ ထို့ပြင် သတ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာလည်း သတ်လိုက်သူ၏ လက်၌ အသတ်ခံရသူအတွက် ချီးမြှင့်ထားသည့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရိုဇီရိက္ခာကို ဖြတ်တောက်ရန်ဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်သည် ထပ်၍နှစ်ဆတိုးသွားပြန်သည်။ ထို့နောက် တတိယ အကြီးဆုံးပြစ်မှုမှာ လူတစ်ဦးသည် မိမိအိမ်နီးချင်း၏ ဇနီးအား (ဇိနာ) တရားမဝင်ကာမမှု ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဇိနာ သည် တတိယအကြီးဆုံး အပြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်သည်။ ဇိနာ ကျူးလွန်ခံရသူမှာလည်း သာသနာက ကောင်းကျိုးပြုရန်၊ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံရန် မှာကြားထားသည့် အိမ်နီးချင်း၏ ဇနီးဖြစ်သဖြင့် ၎င်း၏အပြစ်သည် ပိုကြီးသွားပေသည်။
ကောင်းမြတ်သည့် လုပ်ရပ်များသည် မွန်မြတ်မှု၌ မတူညီကြသကဲ့သို့ အပြစ်အကုသိုလ်များသည်လည်း ပြစ်မှု၌ အကြီး၊အသေး ကွဲပြားကြသည်။
ဟဒီးဆ်တော်က ညွှန်ပြထားသည့် အကြီးဆုံးအပြစ်အကုသိုလ်များမှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား (ရှိရ်က်) ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲကိုးကွယ်ခြင်း၊ ၎င်း၏နောက်တွင် အစ္စလာမ့် တရားဥပဒေအရ သတ်ခြင်းမှလွဲ၍ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ဟရာမ် တားမြစ်ထားသော အသက်တစ်ချောင်းကို သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ၎င်း၏နောက်တွင် ဇိနာ တရားမဝင်ကာမမှု ကျူးလွန်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အကီဒဟ် ယုံကြည်ချက်။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အပေါ် အီမာန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း။ . အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ရဗ်ဖြစ်ခြင်း၌ တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူခြင်း။ .
အကြင်သူသည် တစ်ပါးတည်းဖြစ်တော်မူသော၊ ဖက်စပ်ယှဉ်တွဲခြင်းကင်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ခံထိုက်တော်မူသော အရှင်မရှိကြောင်းနှင့် မုဟမ္မဒ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျွန်နှင့် ရစူလ်တမန်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်း၊ အီစာ (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျွန်နှင့် ရစူလ်တမန်တော်ဖြစ်တော်မူပြီး မရ်ယမ်သခင်မထဲသို့ထည့်သွင်းပေးခဲ့သည့် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ (ကလိမဟ်) မုက္ခပါဌ်တော်နှင့် အရှင်မြတ်ထံတော်မှ(ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်)ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျန္နသ်သုခဘုံသည် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသည် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံခဲ့လျှင် ၎င်း၏အမလ်ကျင့်ဆောင်မှုသည် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် သူ့အား ဂျန္နသ်သုခဘုံသို့ ဝင်ရောက်စေတော်မူမည်။
မည်သည့် ကျေးကျွန်မဆို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားခဝပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိကြောင်းနှင့် မုဟမ္မဒ်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အစေတော်နှင့် ရစူလ်တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်း စိတ်နှလုံးသားထဲမှ မှန်ကန်စွာ သက်သေခံခဲ့လျှင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ထိုသူ့အပေါ် ငရဲမီးကို ဟရာမ်အဖြစ်သတ်မှတ်တော်မူမည် ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာသည် မဏ္ဍိုင်ကြီး ငါးခုအပေါ်တွင် ဆောက်တည်ထားသည်။